जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? सहकारीमा जागिर खाने सुनौलो अवसर (विज्ञापनसहित) - dautarimedia.com
जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? सहकारीमा जागिर खाने सुनौलो अवसर (विज्ञापनसहित)
काठमाडौँ – इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी आह्वान गरेको छ । संस्थाले एक जना कर्जा अधिकृत र ५ जना बजार प्रतिनिधी माग गरेकाे हाे ।तलको विज्ञापन हेरी योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन् । संस्थाले प्रकाशन गरेकाे सूचना यस प्रकारकाे छ
काठमाडौँ । सफा, दागरहित तथा चम्किलो अनुहार कसलाई मन पर्दैन होला ? तर, आजको व्यस्तताले भरिएको जिन्दगीमा हामी आफ्नो छालामा पर्याप्त ध्यान दिन पाउँदैनौं ।जसका कारण छाला मृत तथा रुखो देखिन थाल्छ । तनाव, प्रदूषण तथा तनावको सोझो प्रभाव हाम्रा छालामा नै देख्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो छालाको चमकलाई बचाउन धेरै कुरामा ध्यान दिनु पर्छ।
Previous: टिकटकमा भिडियो बनाउदा, यी युवतीले भिडियोमै क’पडा खो’लेपछी ईन्टरनेटमा भाइरल (भिडियोको हेर्नुहोस्)